Ajajawwan fi dirqalawwan dhiheessaa tokkoo kaasuuf gargaaran of keessaa qaba.
Agarsiisa islaayidii bitaamoggee gadiitti lakkoofsa yeroo waliin jalqaba.
Yeroo agarsiisa islaayidii yommuu wantichii filatamee akkamitti amala akka agarsisuu hika.
Sochii Fakkinaa Maamiloo
Islaayidii filatamee yeroo mul'atu akka hin agarsiifamne taasisa.
Agarsiisa Islaayidii Maamiloo
Pirezenteshiinicha ammaa keessa islaayidoota fayyadamuun agarsiisaa islaayidii baratamoo hiika feedhii dubbistoota keeti guutuuf islaayidoota kaasuu dandeessa. Agarsiisoota islaayidii baratamoo hamma dandeessuu uumuu dandeesa.
Title is: Agarsiisa Islaayidii